प्रहरीकै मिलाेमताेमा पाेखरामा याैन ब्यासाय ! - Maxon Khabar
Home / News / प्रहरीकै मिलाेमताेमा पाेखरामा याैन ब्यासाय !
प्रहरीकै मिलाेमताेमा पाेखरामा याैन ब्यासाय !
नेपालको सुन्दरी नगरी कास्कीको पोखरामा कुनै बेला मुख्य मन्त्री पृथ्वी सुवा गुरुङले पोखरामा रेड लाइट एरिया तोक्न सकिने भन्ने अभिब्यक्ति दिएपछी सामाजकि संजाला उनको चर्को आलोचना भएको थियो। केही नेपालमा रेड लाइट एरिया नहुदा पनी बलात्कारका घटनाहरु देशमा बढेको भन्दै सो तारिफ समेत भएकाे थियाे ।
राज्यले यौन धन्दालाइ कानुी मान्यता नदिएपनी बेलाबेलामा लुकी छिपी सो धन्दामा संलग्न पक्राउ परी रहेको बेलाबेलामा समाचाहरु आइरहन्छन तर पोखरामा यस्तो किसिमको यौन धन्दा भइरहेको छ जहा प्रहरीकाे प्रत्यक्ष मिलोमतो रहेको रहस्य खुल्न आएको हाे । कास्कीको एक पाछिक पत्रिका तथा सम्बाद न्युज ले आजभाेली पोखरामा लुकीछिपी ब्यापारीकाे प्रहरीसंग को सेटिङमा यौन धन्दा भैरहेकोे दावी गरेको छ ।
सम्बाद न्युज अनुसार यदी कुनै ठाउमा यस धन्दा बारे छापा मार्न जादा त्यो भन्दा अगाडी नै मिलोमतोमा रहेका जुनीएर प्रहरीले ब्यावसायीलाइ गोप्य सुचना दिने गरेका छन । जसबापत उनीहरुले ब्यावसायीबाट रकम लिनुको साथै याैनकर्मी संगयौन सम्बन्ध राख्ने र बिदाको समयमा रक्सी मासु समेत खान पाउने एक यौन ब्याबासीले नाम नखुलाउने शर्तमा बताएका छन ।
सो बिषयमा जवाफ माग्दा बैदाम प्रहरी चौकीका डिएसपी कोमल शाहका अनुसार मिडियालाइ जवाफ दिने काम जिप्रकाका प्रबक्ता तथा डिएसपी राज कुमार क्षेत्रीको रहेको बताएका छन साथै उनले आफ्नो क्षेत्रमा प्रहरीकै संलग्नतामा गैरकानुनी यौन धन्दा भैरहेको प्रमाण प्राप्त भए कारबाही गर्ने बताउदै आफनाे एरीयामा मात्र नभै कास्कीमै अबैध याैन धन्दा हुन नदिने जानकारी दिएका छन । साथै यस भन्दा अगाडी पनी यौन ब्याबसायमा संलग्न भएकालाइ पक्राउ गरी मुद्दा समेत चलाइएको डीएसपी कोमल कार्कीले बताएका छन ।
स्रोतका अनुसार हाल पोखराको लेकसाइडमा गेष्ट हाउस नै भाडा लिइ गुप्त रुपमा यौन धन्दा हुने गरेको छ । जसमा एक रातको ५–१० हजार सम्म रेट तिरेर ग्राहकले यौनकर्मी महिलालाइ लगे पनी उनीहरुले भने १–२ हजार मात्र पाउने र अन्य पैसा ब्याबसायी र सेटिङ मिलाउने दलालहरुले लिने गरेका छन । सरकारले यौन ब्याबसायलाइ बैधानकिता नदिएपनी हाल पोखरामा झण्डै ४०० जना हारा हारीमा यौनकर्मी महिला रहेको अनुमान रहेको छ । पोखरामा हालै आएका प्रहरी प्रमुखले यसबारे अनुसन्धान अगाडी बढाउल त ? भन्दै १५ जना संचालकहरुको सम्पर्क नंम्बर पनी आफुहरुसंग रहेको सम्बाद न्युजले दावी गरेको छ ।